Waxaad bedeli kartaa magaca ku yaala DRIVING LICENCE - NATIONAL INSURANCE NUMBER - PASSPORT,BANGIGA,KUWA CARUURTA iyo wixii DUKUMENTI ah ee aad isticmaashid,adigoo u baahan oo keliya waraq la yiraahdo DEED POLL,oo dhamaan hay'adaha UK ay ictiraafsan yihiin.
Wax dhib ah haba yaraatee kuu keeni mayso, magacii aad hore u isticmaali jirtayna halkaa ayuu ku dhamaanayaa.
DEED POLL waxaad ka dalban kartaa ONLINE adigoo lagaa rabin wax XAQIIJINAYA magacaagii hore iyo sababta aad u bedeleysid,5 maalmood ka dib markii ay kuu soo dhacdo waraaqda DEED POLL,isla markaa waxaad u kala direysaa wasaaradaha UK ee qaabilsan wixii aad dooneysid in aad u bedeshid magacaaga cusub.
Shirkada ugu caansan ee sameysa DEED POLL waa - UK DEED POLL SERVICE HALKAN RIIX
Su'aalaha inta badan iman kara iyo jawaabtooda hoos ka aqri:
1- CARUURTA aan dhalay magacooda ma bedeli karaa?
Haa waad bedeli kartaa,hadii da'da ay ka yartahay 16 - waxaa loo baahan yahay in AABAHA iyo HOOYADA ay RAALI ka wada yihiin,hadii aysan isku meel joogin ama aanu is qabin,qofka maqan waa in laga helaa waraaq ogolaansho ah:
2- Imisa jeer ayaan bedeli karaa magaceyga?
Intii aad doontid ayaad bedeli kartaa magacaaga,adigoo mar walba buuxinaya FOOM cusub.
FOOMKA is diiwan gelinta magac bedelka HALKAN RIIX
Waraaqda DEED POLL waxaa laguu soo dirayaa waqti 5 MAALMOOD ah,waxaad codsan kartaa dhowr koobi,si aad ugu kala dirtid hay'adaha aad magacaaga ka bedelaysid
Xiliga laguu soo diro waxaa loo baahan yahay in ay kugu hor saxiixaan laba qof oo MARQAATI ah si - waraaqda loo aqbalo.
Magaca hadii aad bedeshid - BAASBOOR CUSUB iyo wixii kale ee DUKUMENTI ah laguu soo diro,magacaagii hore waa MAMNUUC in aad isticmaashid,wax walba INVALID mise WAXAAN JIRIN ayaa laga dhigayaa,meel walbana waa laga masaxayaa,markaa ha is oran LABA MAGAC ayaad isla isticmaali kartaa.
Wadanka UK,da'a lama bedeli karo,waxaa keliya uu bedeli kara MAXKAMADA SARE,iyadoo kaashaneysa DNA iyo RAAJADA ILKAHA,taasoo 100%85 sheegi karta da'da saxa ah.
Wixii macluumaad ah la xirir info@solaportal.com